Kurwiswa pamwe chete muSyria kunokanganisa misika yemasheya? | Ehupfumi Zvemari
Kurwiswa pamwe chete muSyria kunokanganisa misika yemasheya?
Iwe uri chokwadi kushamisika kuti kurwiswa kwazvino kwekubatana munzvimbo yakadayi yepasi pano kunokanganisa sei portfolio yako. Middle East. Uye kunyangwe dai zvaigona kudzokororwa pamusoro pemavhiki anotevera. Uye zvechokwadi kutsiva uko kwakanyanya kugona kwepasirese seRussia kunogona kutora. Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoda kujekeswa nevashambadzi vadiki nepakati kuti vagone kuisa mari yavo nekuchengetedzeka kukuru mumazuva ano akakosha mune geopolitics dzenyika dzese. Nekuti ivo vanokwanisa kukanganisa chikamu chemari nenzira yakasarudzika kupfuura iwe yaunogona kutanga kutenda.
Zvese izvi mune mamiriro emisika yemari izvo zvisina kunaka kwenguva pfupi. Iko kunosarudzwa index yeSpanish equities, iyo Ibex 35 kusvika ikozvino gore rino rave padyo ne3% kusvika pamatanho e9.724 mapoinzi. Imwe yedzinonyanya kucherechedzwa dhata yenguva ino ndeyekuti chete zvishoma zvishoma kupfuura gumi kukosha zvinoratidza kuongororwa mukota yekutanga yegore. Zvakanyanya kudaro chiitiko ichi mumisika yemaketi iyo kusagadzikana kunoratidza iyo yeXIX indekisi iri pamapoinzi gumi nemapfumbamwe. Ndichiri kune imwe, vazhinji uye vazhinji vaongorori vari kutanga kuona kupera kwemusika wemusika wemusika wakatanga muna Chikunguru 2009.
Kune izvo zvinowedzerwa pane ino chiitiko kusanzwisisika kunogadzirwa nekushamisika kwemauto kurwisa muSyria. Hwehukama hwekutanga mumisika yemari hwakanga husina kunyanya kukosha, kure nazvo. Asi zvinopesana, aya mafambiro ehondo havana kukanganisakana mumisika yemari. Ndokureva, iwe haugone kuvaita kuti vabatsire kunze kwekunge mune mamwe marondedzero chaiwo emusika wemitengo uye kubva pamitengo yemitengo zvirokwazvo isina kuwanda. Izvi ndezvenguva iyo yekutanga maitiro akamboitika kubva pamusika wemasheya kusvika pakukwira kwehondo mune imwe yenzvimbo dzinonetsa kuMiddle East.
1 Siria: iri kukanganisa mafuta here?
2 Kukwira kukuru mumakambani emaoko
3 Imwe sarudzo, enda kumisika
4 Maitiro haana kunge aine mhirizhonga
5 Maitiro ekushandisa izvozvi
Siria: iri kukanganisa mafuta here?
Imwe yemisika inonyanya kunetseka nekurwiswa kwemauto iyi ndiyo inotaura nezve ndarama nhema. Asi ino nguva, mhedzisiro yezvakakanganisa zvisati zvagadzirwa. Nekuti mutengo wemafuta mumisika yemari wakwira, asi kwete nehukuru hunodiwa nevamiriri vemari. Ehezve, hazvikurudziri kuti pane shanduko kamwe kamwe mumutengo weiyi yakakosha mari yemari. Semhedzisiro yechiito ichi, haugone kuunganidza maitiro aya kuti uwane mabhenefiti mashoma maringe ne purofiti yemabasa emusika wemasheya. Kunze kwekuwedzera kushoma uye kubatika nenguva kusiri kuchinja pasi pemitengo yeaya akasarudzika maitiro emari dzekunze.
Kubva panguva ino, haakwanise kukanganwa kuti iyo petroleum inonzwisisika kune iyi mhando yezviito mumisika yemari. Mupfungwa iyi, mumwe wevabatsiri vakakura veiyi geostrategic mamiriro makambani emafuta. Nekukosha kwakakosha mumutengo wemasheya ayo, semhedzisiro yekusava nechokwadi mumisika yemari. Pamusoro pezvo, vane mamiriro ekumusoro kumashure ayo anobatsira kwazvo kuti iwe ugone kuchengetedza zvine pundutso panguva ino mune kusahadzika kwekupedzisira nezve zvichaitika muSyria. Nedividhi goho riri muzviitiko zvakanyanya padhuze nematanho mashanu%.
Kukwira kukuru mumakambani emaoko
Pasina mubvunzo, iri kirasi yemakambani ndivo vanobatsirikana pane ino yakasarudzika mamiriro. Kusvika padanho rekuti kumuka kukuru kwakatarwa mumisika yequity pasirese. Hazvishamise kuti mitsara yayo yebhizinesi yakatsigirwa nezviitiko zvakaitika mumazuva achangopfuura muMiddle East. Mupfungwa iyi, unogona kuvhura zvinzvimbo kana iwe uchifunga kuti zviitiko izvi zvicharamba zvichienderera mberi. Sezvo iyo kudzokorora zvinogona kunyatso kuve zvinoyevedza uyezve zviri nani kupfuura mune mamwe maratidziro akajairika.
Nekudaro, rimwe rematambudziko makuru rauinaro neiyi nzira yekudyara ndeyekuti iwe haugone kuzviita pane emasheya emunyika. Kana zvisiri, pane kudaro, uchafanirwa kuenda kumisika yepasi rese kana iwe uchida kugutsa ichi tuto chishuwo. Kunyanya, mune maIndices eU.S. inova ndipo panotariswa makambani mazhinji. Nechipo chakakura kwazvo uye chinogona kukutungamira kuti usarudze akanakisa ezvakataurwa zvine hunhu hwakadai.
Imwe sarudzo, enda kumisika
Chero zvazvingaitika, kana chimiro chaunopa semudhara mudiki nepakati chiri kuzvidzivirira, unogona kugara uchifunga kubuda mumisika yezvemari. Zvekuti nenzira iyi iwe uri mukuzara zvakakwana kuchengetedza nzvimbo dzako. Uye zvakare, inozove inoshanda kwazvo zano kuitira kuti gare gare iwe ugone tora iwo chaiwo mikana bhizinesi iro richazonyatso kuunzwa kwauri kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamise kuti ichave iri nguva yemwedzi mishoma kwaunofanirwa kunge uri kure nemisika yemasheya. Pamusoro pazvose kudzivirira zviitiko zvisingafanoonekwi.
Kune rimwe divi, kana iwe ukagara mune yakazara mari, hazvireve kuti iwe hauite iyo kuchengetedza kunobatsira. Hongu kwete, nekuti iwe unogona kuwana diki kudzoka kuburikidza ne kuiswa mukati memwedzi mishoma. Hapana njodzi mukuita uye yakapihwa sebhiriji kudzamara wadzokera kumisika yemari. Nekuti munguva pfupi iwe unozotorera zvako zvipo zvemari pamwe nevavanofarira. Uye pamwe nebhenefiti yekuti haufanire kutora chero mhando yemakomisheni kana zvimwewo mari mukutungamira kana kugadzirisa izvi zvigadzirwa zvebhangi. Ichi chinhu chaunofanirwa kufunga nezvacho kuti usiye mari yakamiswa mumamiriro ezvinhu sechibva pane zviri kuitika muSyria.
Maitiro haana kunge aine mhirizhonga
Chero nzira, maitiro mazuva ano kubva kumisika yemari haina kumboita mhirizhonga munzira ipi neipi. Asi zvinopesana, misika yemasheya iri kutongwa nemimwe misiyano senge kusvika mavhiki mashoma apfuura. Mune mamwe mazwi, pane kururamisa mumitengo inogona kugara kwemwedzi mishoma. Pasina iwe uine zvakawanda zvekuita nezviitiko zvehondo izvi zviri kuitika mune imwe yenzvimbo dzinotyisa kwazvo pasi. Zvirinani kusvika nhasi uye sekureba sekunge pasina zvimwe zvakagadziriswa mumauto nehondo kuwedzera. Mupfungwa iyi, zvinogona kuitwa neRussia, Iran kana Turkey zvinonyanya kukosha kuhukama hwako nenyika yemari.
Izvo zvakakoshawo kuti iwe uzive kuti zvakakosha kwazvo kuti chero bedzi zvinhu zvisingaendere mberi, mari inogona kunyarara mumusika wemasheya. Nemafungiro ane musoro semhedzisiro yekufamba mumisika yemasheya. Iko kunogona kuve nemusiyano wakakosha pakati pemitengo yakakwira uye yepasi yezvivakwa zvakasarudzwa kana midziyo yemari. Ichi ndicho chinenge chinhu icho equities chiripo mune dzino chaidzo nguva uye kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi kana hwakakosha hunhu.
Maitiro ekushandisa izvozvi
Kubva ikozvino zvichienda mberi, hauzove nesarudzo kunze kwekuita akateedzana ezvakajeka zviito kupfuura pakutanga. Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi mamwe akakosha zvakanyanya?
Ita ne kungwarira kukuru kuti zvisati zvaitika uye mune chero zvazvakadaro hauise mari yako yese inowanikwa. Nechikamu chayo, chichava chakakwana kudarika kukwana kugutsa kudiwa kwekudyara.
La kuchinjika Mukudyara ichave imwe yemakiyi anogutsa uye ayo anogona kuvezwa nekusiyana kwakakodzera mukuita kunoitwa. Kwete chete zvichibva pamari inoshanduka, asiwo pamari yakatarwa.
Usatungamire mari dzako ku nguva refu yekugara. Asi zvinopesana, iyo pfupi pfupi ndiyo sarudzo yakanakisa yenguva yakakosha seiyi yatiri kupfuura nayo.
Tsvaga dzimwe sarudzo mauri maungaita kuchengetedza kunobatsira nenzira inogutsa inogoneka. Kunyangwe kubva pazviitiko zvisingafadzi zvemisika yemari. Kusvika pakuti iwe unokwanisa kuzendamira kune mamodheru zvichienderana nekusagadzikana kana kusagadzikana kwemisika yemari.
Unogona mira vhiki shomanana kudzamara tazoona kuti shanduko ichave sei mune ino geostrategic theatre. Zvirinani iwe uchave nekuchengetedzeka kukuru mukushanda, pamwe nekutsvaga iyo yakanyanya kufarira yezvibvumirano zvemari zvigadzirwa.
Zvese zvinhu zvinoita sekunge kukonzeresa kwekupindira kwevarwi muSyria kuchave ne yakaderera zviitiko mumasaga. Mupfungwa iyi, inogona kutove chikonzero chekuwedzera kuwedzera mumisika yemari yemari. Kunyangwe ichifanira kuve panguva yakakodzera uye kuyedza kuita mafambiro auri kuzoita kuti ibatsire kubva ikozvino. Inofanira kunge iine imwe yezvinangwa zvako zvikuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kurwiswa pamwe chete muSyria kunokanganisa misika yemasheya?
Kukosha kwechibvumirano chedhipatimendi mukutenga zvivakwa